Sababta Dhabta Ah Ee Caruurta Ku Tagaan Dugsiyad. (Qormada1Aad) – somalilandtoday.com
Sababta Dhabta Ah Ee Caruurta Ku Tagaan Dugsiyad. (Qormada1Aad)
Post Huffington Post ayaa dhowaan soo daabacay maqaal uu cinwaankiisu yahay, “Cudurka Iskuulka ee Maraykanka ee Dhibaatada Iskuulka La Yiraahdo” oo ku saabsan dhibaatada ka jirta Maraykanka. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro ra’yigayga ku saabsan sababta ay caruurta uga tagaan dugsiga. Waxa aan ka soo xigtaaya mid ka mid ah macalin xirfadle ah fasalka, lataliyaha iskuulka iyo maamulaha dugsiga u adeegay nidaamka dugsiyada New York muddo ka badan 33 sano. Wuxuu rumeysanahay in ay jiraan shan sababood oo waaweyn oo ay carruurtu uga tagayaan dugsiyada:
1. Ardayda naftooda Waxay sameeyaan go’aano qaldan. Waxay ku lug leeyihiin qawlaysatada, mukhaadaraadka
, khamriga, uur qaad iyo dembi gal. Qaar badan ayaa leh habdhaqan dugsi oo liita, waxaana badanaa la fal gala iskuulka. Waxay ku xiran yihiin qoysaskooda, dugsiga iyo nolosha. Ma arkaan sababaha ay u baahan yihiin si ay u aadaan dugsiga. Waxay ku lug leeyihiin nashaadyada dugsiga mana laha kalsooni darro. Qaarkood waxaa lagu hormariyay xirfado la’aan loogu talagalay dhiirigelinta. Qaar ka mid ah dhibaatooyin waaweyn ayaa soo maray oo waxay seegeen maalmo badan oo dugsi ah waxaana lagu wargeliyay in dib loo celin doono. Sababo badan oo ka mid ah shuruudaha kor ku xusan, waa la hakiyay oo waxay ku dheceen shaqadooda waxayna arkeen ujeeddo yar oo ah inay ku noqdaan dugsiga.
2. Qoyska ay ka yimaadeen Inta badan waxaa jira iskudhac u dhexeeya xidhiidhka qoyska iyo iskuulka. Inta badan, waalidiintooda ayaa iskuulka ka joojiyay. Ardaydu waxay ka yimaadaan qoysaska balaadhan, asal ahaan dhaqaalahoodu hooseeyo. Caruurta waaweyn waxay badanaa u baahanyihiin inay shaqeeyaan si ay qoyska uga caawiyaan dhaqaale ama baahida aasaasiga ah ee qoyska ama waxay u baahan yihiin inay guriga joogaan si ay u daryeeshaan walaalahood da’da yar si waalidkoodu u shaqeeyo.
Caruur badan ayaa ka yimaada guryaha aan luuqadda Ingiriisiga lagaga hadlin oo ah tiro aad u badan oo ka mid ah kuwa dugsiyaada seegay. Guryaha waalidiinita kelida ah waxay noqdeen kuwa caadiga ah ee Maraykanka. Carruur badan oo waalidkood kala tageen ama ay ka maqan yihiin, amaba qooysaska rabshaduhu ka jiraan guryahooga, loona heli Karin baahiyaadka aas aasiga ah sida cuntada, Dharka iyo hooyga.
3. Bulshada ay ka yimaadaan caruur badan ayaa ku nool dhinaca qaldan ee wadooyinka ee meelaha aan waxbarashada la qiimeeynin, halkaas oo daroogooyinka, burcadda iyo rabshado ka jiraan iyo meelaha dugsiyadoodu waxbarasho ahaan ay aadka u hooseeyaan.
Waxa ayaa markoodii hore ka yimaadaan bulsho nolasha ka dhacday.
4. Dugsiyada ay dhigtaan Iskuuladu waa halboolaha waxbarashada, ardayda, waalidka iyo shaqaalaha. Ardayda waxaa laga mamnuucay xadgudubyada yar yar sida macalinka oo hadal lagu soo celiyo, ama lagu daro “fasalada dadka waweyn” Dugsiyadu waxay leeyihiin dhaqamo rajo hooseeya. Waxay haystaan la-talin hanuunin ku filan. Manhajka ma aha mid ku haboon baahida ardayda. Istaraatijiyadaha waxbarashada ee imtixaanka ayaa loo isticmaalaa iyadoon loo eegin qaababka waxbarashada ardayga shakhsi ahaaneed. Kuwa aan macallinimada looma tababarin farsamadii ugu dambaysay ee barashada teknoolajiyada. Maalgelinta waxay ku saleysan tahay qiimaha hantida sidaa daraadeed xaafadaha dakhliga hoose waxay helaan maaliyad yar oo ka yar ta ay helaan qooysaska hodanka ah. Wadamada qaarkood ayaa miisaaniyadooda mudo yar oo kooban ku ansixiya iyada oo si qoto dheer looga fikirin.
5. Macallimiinta ay haystaan , Macallimiinta ugu khibrad iyo tabarka yar ayaa loo qoondeeyey dugsiyada ugu adag. Waxay soo galaan maalinimada ku xigta iyaga oo leh rajooyin aad u sareeya kuwaa sooy ka heleen intii la tababaraayay si ay u yeeshaan xirfadii loo baahnaa. Weey ka tagaan xirfadii macalinimada taasoo kurudh ku keentay sida macalimiinta ka baxaysa macalinimada. Afartan iyo lix boqolkiiba macallimiintu waxay ka baxaan goobta shan sano gudahood. Marka la waydiiyo sababta ay u baxayaan, aqlabiyadda in ay aqbalaan in ay si habboon ugu diyaargaroobin.
W /Q : Cabdiraxmaan Maxamed Suleekh (Saacid)
Kalkaaliye caafimaad Ahna Qoraa